Bit By Bit - Running fanandramana - Activities
[ , ] Berinsky sy ireo mpiara-miasa (2012) nanombatombana ny MTOUR amin'ny ampahany amin'ny fanavaozana ireo fanandramana malaza telo. Ampiasao ny fanandramana malaza nataon'i Azia Tversky and Kahneman (1981) . Moa ve ny valiny mifandanja amin'i Tversky sy Kahneman? Moa ve ny valiny mifandraika amin'ireo Berinsky sy ireo mpiara-miasa? Inona - raha misy na inona na inona-moa ve izany mampianatra antsika momba ny fampiasana MTOUR ho fanandramana fanadihadiana?
[ , ] Tao anaty taratasy somary am-bava mitondra lohateny hoe "Tsy maintsy tapitra izahay," ilay psikology sosialy Robert Cialdini, iray amin'ireo mpanoratra ny Schultz et al. (2007) , dia nanoratra fa nialany tamin'ny asany ho profesora izy, anisan'izany ny olana atrehiny amin'ny fanaovana fanandramana eo amin'ny sehatra (psychology) izay mitarika ny fanandraman'ny laboratoara (Cialdini 2009) . Vakio ny lahatsoratr'i Cialdini, ary manorata mailaka manentana azy hamerina handinika ny fiatombohany amin'ny fanandramana dizitaly. Mampiasà ohatra azo tsoahina amin'ny fikarohana izay miteraka ny ahiahiny.
[ ] Mba hahafantarana raha ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny van de Rijt sy ny mpiara-miasa (2014) niditra an-tsehatra tao anatin'ny rafitra efatra samihafa izay nahatonga ireo mpandray anjara voafantina, ary avy eo dia nandrakitra ny fiantraikany naharitra teo amin'io fahombiazana io. Azonao atao ve ny mieritreritra rafitra hafa izay ahafahanao manao fanandramana mitovy amin'izany? Mamaritra ireo rafitra ireo amin'ny resaka lanja ara-tsiansa, algorithmika mifangaro (jereo ny toko 2), ary ny etika.
[ , ] Ny vokatry ny fanandramana dia miankina amin'ireo mpandray anjara. Mamoròna fanandramana ary manomboha izany ao amin'ny MTurk amin'ny fampiasana paikady roa samihafa. Miezaha mifidy ny paikady fanandramana sy fandraisana an-tsoratra ka ny vokatra dia ho hafa araka izay tratra. Ohatra, ny paikady fandraisam-peo dia mety ho ny mamerina ny mpandray anjara amin'ny maraina sy ny hariva na hanonerana ny mpandray anjara amin'ny karama ambany sy ambany. Ireo karazana fahasamihafana eo amin'ny paikady fandraisana an-tsoratra dia mety hitarika any amin'ny dobo samihafa amin'ireo mpandray anjara sy ireo vokatra azo tsapain-tanana. Hafa tanteraka ny valin'ny vokatrao Inona no asehon'ity tantara ity momba ny fanandramana mihatra amin'ny MTOUR?
[ , , ] Alao sary an-tsaina hoe mikasa ny hanao fanandramana mifandray amin'ny fihetseham-po ianao (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) . Ampiasao ny valiny avy amin'ny fandinihana nataon'I Kramer (2012) momba ny isan'ny mpandray anjara amin'ny toe-javatra tsirairay. Ireo dingana roa ireo dia tsy mifanaraka tanteraka ka azo antoka ny lisitra mazava tsara ny soso-kevitra rehetra izay ataonao:
Manaova fikarohana izay hanapahan-kevitra hoe firy ny mpandray anjara no ilaina mba hamantatra ny vokatra lehibe toy ny vokatra ao Kramer (2012) miaraka amin'ny \_(\_alpha = 0.05\_) ary \_(1 - \_beta = 0.8\_) .
Manaova fanitsiana mitovy amin'izany.
Raha jerena ny vokatra avy amin'ny Kramer (2012) dia ny fifandirana ara-pihetseham-po (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) matanjaka (izany hoe, manana mpandray anjara bebe kokoa noho ny ilaina) ve izy?
Amin'ireo tanjona nataonao, izay misy fiantraikany goavana eo amin'ny kalkilinao?
[ , , ] Valio ny fanontaniana teo aloha indray, fa amin'ity indray mitoraka ity fa tsy mampiasa ny fanadihadiana nataon'ny teo aloha observational Kramer (2012) , mampiasa ny vokatra voajanahary avy amin'ny fanandramana teo aloha ny Lorenzo Coviello et al. (2014) .
[ ] Both Margetts et al. (2011) sy van de Rijt et al. (2014) nanao fanandramana nianatra ny fizotran'ny olona nanao sonia fanangonan-tsonia. Ampitahao ary ampitahao ny teti-panorona sy ny fikarohana momba ireo fianarana ireo.
[ ] Dwyer, Maki, and Rothman (2015) nanao fanandramana roa momba ny fifandraisan'ny fitsipi-pifehezana ara-tsosialy sy ny fitondrantenan'ny tontolo iainana. Ity ny fehin-kevitry ny taratasiny:
"Ahoana no mety hampiasana ny siansa psycholojika hampirisika ny fitondran-tena manodidina ny tontolo iainana? Tao anatin'ireo fandalinana roa, ny dinidinika mikendry ny hampiroborobo ny fitantanana ny fitehirizana ny angovo ao amin'ny efitrano fandroana dia nandinika ny fiantraikan'ny fitsipi-pitenenana sy ny andraikitry ny tsirairay. Ao amin'ny Fandalinana 1, ny toetran'ny hazavana (izany hoe, na teo an-toerana na teo) dia novaina talohan'ny nidiran'ny olona niditra tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny notsongaina, ka nanamarika ny fenitra an-tsoratra momba izany toe-javatra izany. Ny mpandray anjara dia azo antoka kokoa ny mampiato ny jiro raha toa ka tsy tafiditra izy ireo. Ao amin'ny Fandalinana faha 2 dia misy fepetra fanampiny izay nampidirin'ny mpiray tsikombakomba ny fampihodinana ny hazavana, saingy ny mpandray anjara dia tsy tompon'andraikitra amin'ny famadihana izany. Ny andraikitry ny tsirairay dia nanamafy ny fiantraikan'ny fitsipi-pifehezana momba ny fitondrantena raha tsy tompon'andraikitra tamin'ny famerenana ny hazavana ny mpandray anjara dia nihena ny fiantraikan'ny fitsipika. Ireo vokatra ireo dia maneho fa ny fitsipi-pitondran-tena sy ny andraikitry ny tena manokana dia afaka mamaritra ny fahombiazan'ny dinidinika momba ny tontolo iainana. "
Vakio ny taratasiny ary ambarao ny famokarana ny fianarana 1.
[ , ] Miorena eo amin'ny fanontaniana teo aloha, ambarao ny endrikao.
Ahoana ny fampitahana ny vokatra?
Inona no mety hanazavana ireo fahasamihafana ireo?
[ ] Nisy fifanakalozan-kevitra be momba ny fanandramana nampiasain'ireo mpandray anjara nokaramain'ny MTurk. Etsy ankilany, nisy ihany koa adihevitra be momba ny fanandramana nampiasain'ireo mpandray anjara nokaramain'ny mpianatra mpianatra ao amin'ny oniversite. Manorata tsiaro roa pejy izay mampitaha sy mifanohitra ny Turkers sy ny mpianatra ho mpandray anjara amin'ny fikarohana. Ny fampitahanao dia tokony ahitana ny adihevitra momba ny olana ara-tsiansa sy ara-pitaovana.
[ ] Ny bokin'i Jim Manzi Uncontrolled (2012) dia fampidirana mahafinaritra amin'ny herin'ny fanandramana amin'ny raharahambarotra. Ao amin'ny boky dia naveriny ity tantara manaraka ity:
"Indray mandeha aho dia nivory tamin'ny zava-misy marina momba ny raharaham-barotra, mpandala ny fahaleovan-tena izay manana ny dikany lalina, ary mampiavaka ny herin'ny fanandramana. Ny orinasany dia nandany loharanom-baovao manan-danja manandrana ny hamolavola seho an-tsarimihetsika lehibe izay mety hahasarika ny mpanjifa sy hampitombo ny varotra, araka ny fahendren'ny herisetra nilaza fa tokony. Ireo manam-pahaizana dia nandinika tamim-pitandremana ny endriny taorian'ny fandinihana, ary nandritra ny fotoam-pitsapana nandritra ny taona maromaro dia tsy naneho ny vokatra mahakasika ny vokatra fanehoana vaovao amin'ny fivarotana. Ny serivisy varotra sy ny mpivarotra merchandising dia nihaona tamin'ny CEO mba hamerina hijery ireo valim-pikarohana ara-tantara amin'ny toto. Rehefa avy nanolotra ny antontan-kevitra rehetra niainana izy ireo, dia nanatsoaka hevitra fa diso ny fahendreny mahazatra - ny fisehoan'ny varavarankely dia tsy mitondra fiara. Ny tanjon'izy ireo dia ny hampihenana ny vola sy ny ezaka amin'izany faritra izany. Izany dia nampiseho tamin'ny fomba mahavariana ny fahafahan'ny fanandramana hamongorana ny fahendrena mahazatra. Ny valin'ny CEO dia tsotra: 'Ny fehin-kevitrao dia tsy dia tsara loatra ny mpamorona anao.' Ny vahaolana nananany dia ny hampitombo ny ezaka amin'ny famolavolana endri-javatra, ary ny fahazoana olona vaovao hanao izany. " (Manzi 2012, 158–9)
Inona no karazana fahamendrehana manahirana ny CEO?
[ ] Miorena amin'ny fanontaniana teo aloha, alao sary an-tsaina hoe tany amin'ny fivoriana ianao no niresahana ny vokatry ny fanandramana. Inona ireo fanontaniana efatra azonao anontaniana-iray ho an'ny karazana valim-panontaniana tsirairay (statistika, fananganana, anatiny ary ivelany)?
[ ] Bernedo, Ferraro, and Price (2014) nandalina ny fiantraikan'ny fito-taona momba ny fitsabahan'ny rano nofaritana tao Ferraro, Miranda, and Price (2011) (jereo ny sary 4.11). Amin'ity tatitra ity, Bernedo sy ireo mpiara-dia koa dia nitady ny hahatakatra ny rafitra ao ambadiky ny vokatra amin'ny fampitahana ny fitondran-tenan'ny fianakaviana izay tsy nihetsika taorian'ny nanafahana azy. Izany hoe, raha ny marina, niezaka izy ireo hahitana raha misy fiantraikany amin'ny trano na ny tompon-trano ny fitsaboana.
Vakio ny taratasy, ambarao ny endriny, ary fintino ny fikarohana.
Manao ahoana ny vokatr'izy ireo eo amin'ny fomba tokony handinihanao ny fandaniana toy izany? Raha izany, nahoana? Raha tsia, nahoana?
[ ] Ao amin'ny fanaraha-mason'ny Schultz et al. (2007) , Schultz sy ireo mpiara-miasa dia nanao andrana karazana fanandramana telo momba ny fiantraikan'ny fitsipi-pitenenana sy fametrahana amin'ny fomba hafa momba ny tontolo iainana (fampiasana lamba tanana) amin'ny toe-javatra roa (trano fandraisam-bahiny sy tranom-bahiny) (Schultz, Khazian, and Zaleski 2008) .
Fintino ny famolavolana sy ny fikarohana amin'ireo fanandramana telo ireo.
Ahoana, raha toa ka manova ny fandikana nataonao tamin'i Schultz et al. (2007) ?
[ ] Ho valin'ny Schultz et al. (2007) , Canfield, Bruin, and Wong-Parodi (2016) dia nanao andian-dahatsoratra fanandramana momba ny labodina mba handinihana ny famolavolana ny faktiora elektrika. Toy izao no amaritan'izy ireo azy io amin'ny abstrakt:
"Tao anatin'ny fanandramana fanadihadiana iray, ny mpandray anjara tsirairay dia nahita ny volavolan-jokiny momba ny herinaratra ho an'ny fianakaviana izay manana fampiasana herinaratra avo dia avo, mitantara ny fampiasana ny tantara, b) ny fampitahana amin'ny mpifanolo-bodirindrina, ary (c) ny fampiasana ny tantara amin'ny famoahana ny fitaovana. Ny mpandray anjara dia nahita ny karazana fampahalalana rehetra ao amin'ny iray amin'ireo endrika telo, ahitana tabilao, b) dabilio, ary (c) marika famantarana. Manao tatitra momba ireo tranga lehibe telo izahay. Voalohany, nahatakatra ny karazana fampahalalana ny herinaratra ny fampiasana herinaratra ny ankamaroany rehefa naseho tao amin'ny latabatra, angamba satria satria ny tabilaon no manamaivana ny famakian-teny tsotra. Faharoa, ny safidy sy ny fikasana hanavotana ny herinaratra no tena matanjaka indrindra amin'ny fampiasana ny fampiasana ny tantara, tsy mahazatra ny format. Fahatelo, ireo olona manana fahaiza-mamaky lanja kokoa dia nahatakatra ny fampahalalana rehetra. "
Tsy toy ny fanaraha-mason'ny fanaraha-maso hafa, ny vokatra fototra mahaliana an'i Canfield, Bruin, and Wong-Parodi (2016) dia voalaza fa tsy fitondran-tena marina. Inona avy ireo tanjaka sy fahalemen'ity karazana fianarana ity amin'ny fandaharanasa fikarohana lalindalina kokoa hampiroboroboana ny angovo?
[ , ] Smith and Pell (2003) nanolotra fanadihadiana momba ny fanadihadiana an-tserasera mampiseho ny fahombiazan'ny parachutes. Nofintinin'izy ireo hoe:
"Tahaka ny fisorohana maro natao hisorohana ny fahasalaman'ny aretina, ny fahombiazan'ny parachutes dia tsy nampiharina tamim-pahamalinana tamin'ny alalan'ny fampiasana fisedrana mitam-pitsapana. Mpitsoa-ponenana avy amin'ny fitsaboana miorina amin'ny fitsaboana no nanakiana ny fananganana ny dinidinika noraisina amin'ny fampiasana angona azo antoka. Mihevitra isika fa mety handray soa ny rehetra raha toa ny mpilalao sarimihetsika matanjaka indrindra amin'ny fitsaboana miorina amin'ny fitsaboana nomanina ary nandray anjara tamin'ny jiro roa, randomized, plastika, ary fitsapana fihodinan'ny parachute. "
Manorata adiresy mailaka iray ho an'ny gazetim-pifandraisana ankapobeny, toy ny New York Times , miady hevitra amin'ny fanoherana ny porofo manamarina. Manomeza ohatra voafaritra tsara. Soso-kevitra: Jereo koa Deaton (2010) sy Bothwell et al. (2016) .
[ , , ] Ny fahasamihafan'ny fahasamihafana eo amin'ny fahasamihafana eo amin'ny fitiliana dia mety ho marina kokoa noho ny latsa-paka isan-karazany. Manorata memo ho an'ny injeniera iray miandraikitra ny fitsapana A / B amin'ny orinasam-pampitam-baovao sosialy iray manazava ny hasarobidin'ny fomba fanao amin'ny fahasamihafan'ny fahasamihafana amin'ny fametrahana fanandramana an-tserasera. Ny memo dia tokony hampidirina fanambarana iray momba ny olana, ny sasany mieritreritra momba ny fepetra ahafahana manatsara ny fahasamihafan'ny fahasamihafan'ny fahasamihafan'ny fahasamihafana sy ny fomba fijery simulation.
[ , ] Gary Loveman dia profesora tao amin'ny Harvard Business School talohan'ny naha-CEO an'i Harrah's, iray amin'ireo orinasam-pandraharahana lehibe indrindra eran-tany. Rehefa nifindra tao amin'ny Harrah izy, dia namadika ny orinasa i Loveman tamin'ny fandaharam-pivoarana matetika toy ny fiompiana tranainy izay nahangona angon-drakitra betsaka momba ny fitondrantenan'ny mpanjifa. Ankoatr'ity rafitra fitiliana mandrakariva ity, dia nanomboka nanao fanandramana ny orinasa. Ohatra, mety hitarika fanandramana hanombantombanana ny fiantraikan'ny tapakila iray ho an'ny hotely maimaim-poana ho an'ny mpanjifa miaraka amin'ny filokana manokana. Toy izao no namaritan'i Loveman ny maha-zava-dehibe ny fanandramana amin'ny fanao amin'ny raharaham-barotra ataon'i Harrah:
"Tahaka ny tsy ahafahanao manadala vehivavy, tsy mangalatra ianao, ary mila manana vondrona mifehy. Izany no iray amin'ireo zavatra azonao atao hamoy ny asanao amin'ny Harrah's-tsy mitondra vondrona mpitantana. " (Manzi 2012, 146)
Manorata mailaka amin'ny mpiasa vaovao manazava ny antony i Loveman mihevitra fa zava-dehibe tokoa ny manana vondrona mpitantana. Tokony hiezaka ny hampiditra ohatra iray ianao-na tena izy na tsia-asehoy ny hevitrao.
[ , ] Ny fanandramana vaovao dia mikendry ny hamantatra ny vokatry ny fandraisana hafatra fampahatsiahivana amin'ny alàlan'ny famoahana vakisialy. Toeram-pitsaboana zato dimampolo, izay manana marary 600, dia vonona handray anjara. Misy vidin'ny $ 100 ho an'ny klinika tsirairay tianao hiarahana miasa, ary lany $ 1 isaky ny hafatra an-tsoratra alefanao. Ankoatr'izay, ny klinikanao izay hiara-miasa aminao dia handrefesana ny vokatra (na misy olona nahazo vaksina) maimaim-poana. Eritrereto hoe manana teti-bola $ 1,000 ianao.
Amin'ny toe-javatra manao ahoana no mety ho tsara kokoa ny hampifantoka ny loharano eo amin'ny toeram-pitsaboana marobe ary inona no fepetra mety ho tsara kokoa hanaparitahana azy ireo bebe kokoa?
Inona avy ireo antony mety hamaritra ny haben'ny lanjany lehibe indrindra izay ho hitanao amin'ny fomba mahomby amin'ny teti-bola?
Manorata fanamarihana iray manazava ireo fividianana ireo ho an'ny fananganana tsara.
[ , ] Ny olana goavana amin'ny fianarana an-tserasera dia ny fanavakavahana: mpianatra maro izay manomboka ny fianarana dia mamarana ny fivoahana. Alao sary an-tsaina hoe miasa ao amin'ny sehatra fianarana amin'ny aterineto ianao, ary namorona tranonkala fandrosoana momba ny maso ny mpamorona iray ao amin'ny sehatra izay heveriny fa hanampy amin'ny fisorohana ny mpianatra tsy hivoaka ny fianarana. Te-hizaha ny vokatry ny baran'ny fandrosoana amin'ny mpianatra amin'ny sehatry ny siansa sosialy ianao. Rehefa avy niresaka olana ara-pihetseham-po mety hitranga mandritra ny fanandramana ianao, dia miahiahy anao sy ireo mpiara-miasa aminao fa mety tsy hanana mpianatra ampy ny mpianatra fa hahita ny vokatr'ilay baran'ny fandrosoana. Amin'ireto lisitra manaraka ireto, azonao atao ny mihevitra fa ny antsasak'ireo mpianatra dia hahazo ny baran'ny fandrosoana ary ny antsasany dia tsy. Ankoatra izany, afaka mihevitra ianao fa tsy misy fanelingelenana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, azonao atao ny mihevitra fa ny mpandray anjara dia voakasika raha toa ka nahazo fitsaboana na fifehezana izy ireo; Tsy mahomby izy ireo raha misy olona mandray ny fitsaboana na ny fanaraha-maso (ho an'ny famaritana mazava kokoa, jereo ny toko 8 amin'ny Gerber and Green (2012) ). Tazomy hatrany ny soso-kevitra fanampiny azonao.
Eritrereto hoe ny tohin'ny fandrosoana dia andrasana hampitombo ny isan'ireo mpianatra mamita ny kilasy amin'ny 1 isan-jato; Inona no lanjan'ny santionany ilaina mba hijerena tsara ny vokatr'izany?
Eritrereto hoe ny tohin'ny fandrosoana dia andrasana hampitombo ny isan'ireo mpianatra izay mamita ny kilasy amin'ny ampahany 10 isan-jato; Inona no lanjan'ny santionany ilaina mba hijerena tsara ny vokatr'izany?
Alao sary an-tsaina hoe efa nahavita ilay fanandramana ianao, ary nahavita fanadinana farany ireo mpianatra izay nahavita ny fampianarana rehetra. Rehefa ampitahao ny mpianatra fanadinana farany nahazo ny dingam-pandrosoana farany tamin'ireo mpianatra izay tsy nanao izany, dia hitanao fa be dia be ny zavatra tsy nampoizinao, fa ny mpianatra izay tsy nandray ny dingam-pivoarana farany dia niha-ambony. Midika ve izany fa ny lozam-pivoarana dia nahatonga ireo mpianatra hianatra bebe kokoa? Inona no azonao ianarana avy amin'ireto vokatra farany ireto? (Torohevitra: Jereo ny toko faha-7 amin'ny Gerber and Green (2012) )
[ , , ] Eritrereto hoe miasa toy ny mpahay siansa ianao ao amin'ny orinasa tech. Olona iray avy amin'ny sampan-draharaha misahana ny varotra dia mangataka fanampiana amin'ny fanombanana ny fanandramana izay andrandrainy mba handrefesana ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola (ROI) ho an'ny fanentanana dokambarotra an-tserasera. Ny ROI dia voafaritra ho ny tombony avy amin'ny fanentanana mizara amin'ny vidin'ny fanentanana. Ohatra, fanentanana iray izay tsy nisy fiantraikany amin'ny fivarotana dia hanana ROI amin'ny -100%; fampielezan-kevitra izay nahazoana tombombarotra dia mitovy amin'ny vidin'ny ROI 0; ary ny fampielezan-kevitra izay nahazoana tombombarotra dia avo roa heny noho ny vidin'ny ROI amin'ny 200%.
Alohan'ny hanombohana ny fanandramana, ny sampan-draharaha momba ny varotra dia manome anao ireto fampahalalana manaraka ireto miorina amin'ny fikarohana nataon'izy ireo (raha ny marina, ireo soatoavina ireo dia mahazatra ny fanentanana an-tserasera an-tserasera voalaza tao amin'ny Lewis sy Rao (2015) ):
Ny fivarotana midika isaky ny mpanjifa dia manaraka ny fizarana ara-dalàna amin'ny fomba midika hoe $ 7 ary fialan-tsasatra amin'ny $ 75.
Ny fanentanana dia andrasana hampitombo ny varotra amin'ny $ 0.35 isaky ny mpanjifa, izay mifanaraka amin'ny fitomboan'ny tombony amin'ny $ 0.175 isaky ny mpanjifa.
Ny habetsaky ny fanandramana kasaina hatao dia olona 200.000: ny antsasaky ny vondrona fitsaboana ary ny antsasaky ny vondrona mpitantana.
Ny sandan'ny fanentanana dia $ 0.14 isaky ny mpandray anjara.
Ny ROI natokana ho an'ny fanentanana dia 25% [ \_((0.175 - 0.14)/0.14\_) ]. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny sampan-draharaha momba ny varotra dia mino fa ho an'ny 100 dolara isan-taona laniana amin'ny varotra, dia hahazo 25 dolara fanampiny ny orinasa.
Manorata fanamarihana handinihana ity fanandramana napetraka ity. Ny fahatsiarovanao dia tokony hampiasa porofo avy amin'ny famolavolana izay noforoninao, ary tokony handefa olana roa lehibe izy: (1) Hanoro hevitra ve ianao handefa io fanandramana io araka ny nomanina? Raha izany, nahoana? Raha tsia, nahoana? Aoka ho azo antoka fa mazava tsara ny fepetra ampiasainao mba handraisana fanapahan-kevitra. (2) Karazana fitomboana inona no azonao omena an'io fanandramana io? Avereno azafady indray ny hamaritana ny fepetra ampiasainao hanatanterahana izany.
Ny fahatsiarovana tsara dia hamaly izany tranga izany; Ny fahatsiarovana tsaratsara kokoa dia hampihetsi-po amin'ity tranga ity amin'ny fomba tokana (ohatra, asehoy ny fiovan'ny fanapahan-kevitra amin'ny endriky ny vokatry ny fanentanana); ary fampahatsiahivana lehibe no hanolotra vokatra tanteraka amin'ny ankapobeny. Ny memo anao dia tokony hampiasa grafika mba hanampy amin'ny fanohanana ny valin'ny vokatrao.
Ireto misy soso-kevitra roa. Voalohany, mety hanome anao fanazavana tsy ilaina, ny sampan-draharaha momba ny varotra, ary mety tsy namela anao ny fampahalalam-baovao ilaina. Faharoa, raha mampiasa R ianao, dia tadidio fa ny function rlnorm () dia tsy manatanteraka ny fomba andrasan'ny olona maro.
Ity hetsika ity dia hanome anao fampiharana amin'ny famaritana herinaratra, mamorona simulation, ary mampita ny valiny amin'ny teny sy ny sary. Tokony hanampy anao hanao fitiliana herinaratra ho an'ny karazana fanandramana rehetra izany, fa tsy fanandramana natao hanombanana ny ROI. Ity hetsika ity dia mihevitra fa manana traikefa momba ny fanandramana momba ny statistika sy ny famerenana herinaratra. Raha tsy mahazatra ny fanadihadian'ny herinaratra ianao, manoro hevitra aho mba hamaky ny "A Power Primer" nataon'i Cohen (1992) .
Ity hetsika ity dia nahazo tsindrim-peo avy amin'ny taratasy mahafinaritra nataon'i RA Lewis and Rao (2015) , izay maneho mazava tsara ny famehezana ara-statistika amin'ny fanandramana goavana. Ny taratasin'izy ireo-izay nitondra ny lohateny hoe "Momba ny tsy fahampian'ny mason'ny famerenana amin'ny dokam-barotra" - dia mampiseho fa sarotra ny handrefesana ny famerenana amin'ny fampiasana dokambarotra an-tserasera, eny fa na dia misy fanandramana nomerika misy mpanjifa an-tapitrisany aza. Amin'ny ankapobeny, RA Lewis and Rao (2015) mampiseho ny zava-misy marina momba ny statistika izay manan-danja indrindra amin'ny fanandramana dizitaly: sarotra ny maminavina ny voka-dratsin'ny fitsaboana madinika ao anaty tahirim-bidy.
[ , ] Manaova toy ny fanontaniana teo aloha, fa raha tokony ho ny simulation, dia tokony hampiasa valim-panadihadiana ianao.
[ , , ] Manaova toy ny fanontaniana teo aloha, nefa ampiasao ny vokatra simulation sy ny fandinihana.
[ , , ] Alao sary an-tsaina hoe efa nanoratra ny memo voalaza etsy ambony ianao, ary misy olona avy amin'ny sampan-draharaham-barotra manome vaovao vaovao iray: manantena ny fifandraisana 0,4 eo anelanelan'ny fivarotana alohan'ny aorian'ny fanandramana. Ahoana no manova ny soso-kevitra ao amin'ny memo anao? (Torohevitra: jereo ny fizarana 4.6.2 raha te-hahalala misimisy kokoa momba ny fanatsarana ny fahasamihafana sy ny fahasamihafan'ny fahasamihafana.)
[ , ] Mba hanombanana ny fahombiazan'ny fandaharan'asa vaovao momba ny asa ho an'ny asa, dia nisy oniversite nanao dingam-panafihana tsy tapaka teo amin'ny mpianatra 10 000 niditra ny taona farany niainany. Ny famandrihana maimaim-poana miaraka amin'ny fampahalalana manokana momba ny log-in dia nalefa tamin'ny alalan'ny fanasana an-tserasera manokana ho 5,000 amin'ireo mpianatra voafantina, raha ireo mpianatra 5000 hafa kosa dia tao amin'ny tarika mpitantana ary tsy nanana fanoratana. Roa ambin'ny folo volana taty aoriana, ny fanadihadiana manaraka (izay tsy misy valiny) dia nampiseho fa 70% tamin'ireo mpianatra no niantoka ny asa fitoriana manontolo andro tany amin'ny faritra voafidy (latabatra 4.6). Araka izany dia toa tsy nisy vokany ny tolotra aterineto.
Na dia izany aza, ny mpahay siansa malaza ao amin'ny anjerimanontolo dia nijery akaiky ny angon-drakitra ary nahita fa ny 20% -n'ny mpianatra ao amin'ny vondron'ny fitsaboana dia niditra tao amin'ny kaontiny taorian'ny nahazoany ny mailaka. Ankoatra izany, ary mahagaga fa nisy tamin'ireo 60% izay niditra an-tserasera ihany no afaka nanatontosa asa manontolo andro tao amin'ny sehatra nofidiany, izay ambany noho ny tahan'ny olona izay tsy niditra sy ambany noho ny tahan'ny olona amin'ny fehezan-dalàna mifehy (latabatra 4.7).
Manaova fanazavana momba izay mety ho nitranga.
Inona avy ireo fomba roa samihafa hanatsarana ny vokatry ny fitsaboana amin'ity fanandramana ity?
Raha raisina ity vokatra ity, moa ve tokony hanome izany tolotra izany ho an'ny mpianatra rehetra? Mazava ho azy fa tsy fanontaniana tsotra fotsiny izany.
Inona no tokony hataon'izy ireo manaraka?
Soso-kevitra: Ity fanontaniana ity dia mihoatra ny zavatra voarakitra ato amin'ity toko ity, fa ny adihevitra mahazatra amin'ny fanandramana. Ity endrika fanandramana fanandramana ity dia antsoina indraindray fampaherezana satria ny mpandray anjara dia ampirisihina hiditra amin'ny fitsaboana. Ity olana ity dia ohatra iray amin'ny antsoina hoe tsy manan-kery tokana (jereo ny toko 5 amin'ny Gerber and Green (2012) ).
[ ] Taorian'ny fanadihadiana fanampiny, dia hita fa mbola sarotra kokoa ny fanandramana voalaza teo aloha. Nitrangana fa ny 10% -n'ny olona ao amin'ny vondrona mpanara-maso dia nandoa ny fidirana amin'ny serivisy, ary nahatratra ny 65% ​​(latabatra 4.8).
Manorata imailaka manazava izay eritreretinao fa mitranga ary manorata fomba fanao.
Soso-kevitra: Ity fanontaniana ity dia mihoatra ny zavatra voarakitra ato amin'ity toko ity, fa ny adihevitra mahazatra amin'ny fanandramana. Ity olana ity dia ohatra iray amin'ny antsoina hoe tsy fanarahan-dalàna roa (jereo ny toko 6 amin'ny Gerber and Green (2012) ).
Tabilao 4.6: Fijerena tsotra momba ny data avy amin'ny fanandramana asa momba ny asa
Ahazoana fidirana amin'ny tranonkala 5.000 70%
Tsy nahazo alalana tamin'ny tranonkala 5.000 70%
Tabilao 4.7: Fijerena bebe kokoa momba ny data avy amin'ny Career Services Experiment
Voaray ny tranonkala ary midira ao 1000 60%
Ny fahafahana miditra amin'ny tranonkala ary tsy tafiditra ao 4000 72,5%
Tabilao 4.8: Fijerena manontolo ny data avy amin'ny Career Services Experiment
Tsy nomena ny fidirana amin'ny tranonkala ary nandoavana izany 500 65%
Tsy nomena ny fidirana amin'ny tranonkala ary tsy nandoa izany 4.500 70,56%